RAR ပြုပြင်ရေးကိရိယာ RAR Recovery ကို software ကို။ ပြုပြင်ပါ RAR files ။
DataNumen RAR Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး RAR ကမ္ဘာပေါ်မှာပြုပြင်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ် RAR ဖိုင်များကိုအဂတိလိုက်စားမှုလျော့နည်းစေခြင်းဖြင့်သင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှသိမ်းဆည်းပါ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen RAR Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး ၏အရေးကြီးသောစံ RAR ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen RAR Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်၀ င်းအပါအ ၀ င်အခြားပြိုင်ဖက်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်RAR နှင့်အခြား RAR စျေးကွက်အတွင်းရှိကိရိယာများကိုပြုပြင်ပါ။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen RAR Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
RAR file of 115 GB: လုံး ၀ ပျက်စီးသွားသည်။
သင်၏ပရိုဂရမ်သည် ၅ နာရီနှင့် ၃၃ မိနစ်အတွင်း၌ပြုပြင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 1K !!
သြဂုတ်လ 30, 2020
ဒီထူးခြားတဲ့ progremm နဲ့ကျွန်တော်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ ပြsomeနာအချို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်သူများအတွက်စကားလုံး။ လျှင် 'DataNemen Rar ပြုပြင်ရေးအစီအစဉ်
ဒီထူးခြားတဲ့ progremm နဲ့ကျွန်တော်ပြproblemsနာမရှိခဲ့ဘူး။ ပြsomeနာအချို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်သူများအတွက်စကားလုံး။ လျှင် 'DataNemen Rar ပြုပြင်ခြင်းပရိုဂရမ်သည်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ဖိုင်တစ်ခုအားပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ပျက်ကွက်သည်၊ အခြား flash directory တစ်ခုတွင်ပြင်ပ flash ရှိလမ်းညွှန်တစ်ခုသို့မဟုတ် hard-drive သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ ငါသာရံဖန်ရံခါငါသော်လည်းဤအမှုကိုပြုရန်ရှိသည်, most အချိန်၏ကperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်။
စက်တင်ဘာ 6, 2014
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏အပြုသဘောပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကိုစွန့်ခွာရန် ပို၍ ပျော်ရွှင်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အပြုသဘောပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သတ်၍“ DataNewmen” ၏ရံဖန်ရံခါကျရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်အချို့ပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာရှိသည်။ Rar ပြုပြင်ရန် 'a rar ဖိုင်။ ဤအရာသည်ဖြစ်ပျက်လာပါကထိုဖိုင်အားပြုပြင်ရန်အောင်မြင်မှုသည်အခြား directory သို့ရွေ့လျားခြင်းနှင့်၎င်းရှိ function ကိုပုံမှန်အားဖြင့် external flash (သို့) hard-drive များသို့ပြန်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိရသည်။
ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းအားကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြင့်အတည်ပြုရန်သင်လိုအပ်ပါကဒေသတွင်း 'ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း' သို့သာကန့်သတ်ထားနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen RAR Repair v3.5
ဗားရှင်းအားလုံးကိုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု RAR နှင့် SFX ဖိုင်များ။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု RAR နှင့်ဒေသခံကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြုပြင်ခံရဖို့ SFX မော်ကွန်းတိုက်။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု RAR floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု RAR နှင့် SFX ဖိုင်များ။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု RAR 8, 388, 608 တီဘီ (ဆိုလိုသည်မှာ 8, 589, 934, 592 GB) ကဲ့သို့ကြီးမားသောမော်ကွန်းတိုက်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည် RAR လွယ်ကူစွာ Windows Explorer ၏ context menu ကိုနှင့်အတူ archive ကို။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen RAR Repair ပျက်စီးသွားသော Recover ရန် RAR မော်ကွန်းတိုက်
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ RAR အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့် archive ဟာပျက်စီးနေတယ် (သို့) ပျက်စီးနေတယ်၊ ​​သင်ပုံမှန်ဖွင့်လို့မရဘူး၊ သင်အသုံးပြုနိုင်တယ် DataNumen RAR Repair စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် RAR ဖြစ်နိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှသိမ်းဆည်းပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီ RAR နှင့်အတူမော်ကွန်းတိုက် DataNumen RAR Repairကျေးဇူးပြုပြီးဝင်းကိုပိတ်ပါRAR နှင့်ရယူနိုငျသောအခြားမည်သည့် applications များ RAR မော်ကွန်းတိုက်။
ပျက်စီးနေသောသို့မဟုတ်အဂတိလိုက်စားမှုကိုရွေးချယ်ပါ RAR ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်အတွက်မော်ကွန်းတိုက်:
သင်ထည့်နိုင်သည် RAR Archive name ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
archive ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည်
ရှာရန် button ကို RAR Archive ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen RAR Repair ထဲမှာဖိုင်တွေကိုဆယ်တင်ပြီး extract လိမ့်မယ် RAR xxxx သည်အရင်းအမြစ်၏အမည်ဖြစ်သော xxxx_recovered ဟုခေါ်သောလမ်းညွှန်ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ RAR မော်ကွန်းတိုက်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရင်းအမြစ်အဘို့ RAR ပျက်စီးသွားသောမှတ်တမ်း။rarပုံသေ output output directory သည် Damaged_recovered ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
ခလုတ်နှင့် DataNumen RAR Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း RAR ဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
အရင်းအမြစ်လျှင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် RAR ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဤကဲ့သို့သောစာတို box ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင်အဆင့်3တွင်ဖော်ပြထားသော output directory ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းထဲရှိပြန်လည်ကောင်းမွန်သောဖိုင်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
DataNumen RAR Repair 3.5 ကိုမေလ ၃ ရက်၊
DataNumen RAR Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen RAR Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen RAR Repair ၃.၂ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်၊
tempo ၏အပြောင်းအလဲနဲ့တိုးတက်လာသည်rary ဖိုင်များ။
DataNumen RAR Repair 2.8 ကိုAprilပြီလ 19, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen RAR Repair 2.6 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
DataNumen RAR Repair 2.5 ကိုဇွန်လ 28, 2018 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen RAR Repair 2.3 ကိုAprilပြီလ 20, 2018 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
encrypted များအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူတိုးတက်အောင် RAR မော်ကွန်းတိုက်။
DataNumen RAR Repair ၂.၂ ကိုစက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၆ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen RAR Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen RAR Repair ၂.၁ ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ဝင်းကိုထောက်ပံ့ပါRAR v5.x ။
user interface ကိုပြန်လည်ရေးပါ။
အဂတိလိုက်စားမှုကိုတင်ပို့ရန်အထောက်အပံ့ RAR သို့မဟုတ် SFX မော်ကွန်းတိုက်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ ftp server သို့ပို့သည်။
လမ်းညွှန်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု RAR မော်ကွန်းတိုက်။